नेपालमा किन छैनन सिफुड रेस्टुरेन्ट नियमित माछा खानु फाईदै फाईदा – newslinesnepal
नेपालमा किन छैनन सिफुड रेस्टुरेन्ट नियमित माछा खानु फाईदै फाईदा
प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०७७, शुक्रबार २२:२३
-आर. बी. बुढाथोकी
यदी तपाईं माम्साहारी हुनुहुन्छ भने सकेसम्म माछा र माछाबाट बनेका खानेकुरा बढी खाने गर्नुस, जसले तपाईंको मस्तिक्सलाई सधैं ताजा र तेजराख्न मद्त गर्दछ । संसारमा सबै भन्दा कम माछा खाने देश सम्बब त नेपाल नै होला किन कि नेपालमा समुन्द्र छैन । अन्य देशहरुमा हप्तामा पाच छाक माछा खायो भने एक दुई छाक आन्य माम्स खाने चलन छ तर नेपालमा महिनामा एक या दुई छाक मात्र माछा खाने चलन रहेको पाईन्छ । नेपालमा खसी,कुखुरा,भैसी या रागा र बङगुरको मासु बढी प्रचलित छ जुन स्वस्थ्यको लागि त्यती उपयोगी मानिन्न्न किन कि ति अधिकाम्स रातो मासुले शरीरमा कुनै न कुनै बिकार गरीरहेको हुन्छ । रातो मासुलाई पचाउनका लागि झन्डै ३२ देखी ३६ घण्टा लाग्ने गर्छ तर माछा पचाउन मात्रा २ देखी ३ घण्टा मात्र लाग्छ यो हिसाबले पनि माछा खानु अती स्वस्थ्यकर मानिन्छ। माछा भन्दैमा हामी सिमितलाई बुझ्छौ तर बिस्वमा हजार भन्दा बढी माछाका किसिम पाईन्छ जुनको आ आफ्नै रङ,बिशेषता हुन्छ। टुना माछामा पाइने तत्व तिलापिया माछामा पाइदैन त्यस्तै झिङगे माछामा पाइने तत्व सालमन माछामा पाइन्न । एक सजिलो हिसाबले पनि बुझ्न सकिन्छ कि समुन्द्र या पानीमा हुर्कने कुनै पनि जिबले जे भेट्यो तेही खाने हुँदा उसको शरीरमा अन्य जन्तुको तुलनामा केही मेनेरल्स र प्रोटिन प्रसस्त पाईन्छ । अमेरिकन हार्ट एसोसियसनले के पत्ता लगाएको छ भने मनिसलाई आबस्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रोटिन माछाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।माछा खानुका फाईदा कयौ छन तर हामीले केही प्रमुख उल्लेख गरेका छौ ।माछामा २० प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ र जुन दुध या सेरल्समा भन्दा ज्यादा हो । माछामा ओमेगा -३ र एन-३ फ्याटी एसिड पाइने हुँदा यो सबै बर्गका लागि अत्यन्त लाभ दाँयक मानिन्छ । माछा खानु सबै बर्गलाई फाईदा हुने हुँदा नेपाल सरकारले प्रतिदिन न्युनतम पनि ३० ग्राम माछा नियमित आफ्नो खुराकमा समाबेश गर्न सल्लाह दिएको छ ।
मुख्य त माछालाई फिस र सेलफिस गरी दुई समुहमा बाढिएको छ तर पनि माछा र सामुन्द्रिक खाना(जीब) हजारौ किसिमका छन । माछामा सालमन,क्याभिएर,सोल,पम्फ्रेट,हामुर,किङग फिस,रहु,बरगूडा,रेड स्न्यापर,टुना,म्याकेरल,क्याट फिस,स्टार फिस,सार्क,हाम्लेट,ज्याक फिस,पाङगुस(बेक्टी),ओल्ड फिस,क्विन प्यारोट,सार्डिस,सीबास,टाउर्ट,कोड,टेट्रा,मुलेट,बटर फिस,सीरोबिन,बुनिटो,लिजार्ड फिस,पिग फिस,टर्बोन,ब्लुफिन टुना,डोल्फिन,रेड ड्रम,कटल फिस आदी छन। सेल फिसमा लबस्टर,क्र्याब,झिङ्गे माछा,मसेल,क्याम्बस,स्कालप,ओएस्टर आदी प्रमुख छन । त्यस्तै अन्य सिफुडमा अक्टोपस,स्क्विड,कालामारी आदी निकै प्रख्यात छन। बिदेशमा सि फुड रेस्टुरेन्ट ब्यापक चल्ने हुँदा होटलहरुमा पनि अनिबार्य जसो सि फुड रेस्टुरेन्ट खोलेको हुन्छ । नेपालमा भने प्राय सबै सिफुड र माछाका आइटम बाहिरबाट आयात गर्नु पर्ने हुँदा धेरै कम सि फुड रेस्टुरेन्ट खुलेका छन ।
नियमित माछा खादा हुने श्वाश्थ्य सम्बन्धी लाभ
मुटु सम्बधी रोग लाग्नबाट बच्चाउछ ।
माछाले डिप्रेसन हुनबाट बच्चाउछ ।
माछामा प्रसस्त भिटामिन डि पाइने हुँदा क्याल्सैयमका कारणले शरीरका हड्डी मज्बुती बनाउछ ।
माछा खाने गर्नाले तपाईंको निन्दा अत्यन्त राम्रो हुँदै जान्छ जसले गर्दा तपाईं तनाबमा भए नि मस्तिक्सले आराम पाउछ ।
माछा या माछाको फुल खानाले तपाईंको छाला सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरु निगाहा हुन्छ र डन्डीफोर आउने डर हुन्न ।
शरीरमा कोल्स्टोर घटाऊन मद्त गर्छ ।
हाटाट्याक हुनबाट बच्चाउन सहयोग गर्छ
क्यान्सर हुनबाट बच्चाउछ ।
शरीरिक वजन घटाऊन पनि नियमित माछा खनाले धेरै हद सम्म मद्त गरेको हुन्छ ।
उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रन गर्न पनि माछा खनाले धेरै मद्त गरेको हुन्छ ।
कालेजोमा लाग्ने बिभिन्न रोगबाट बच्चाउन पनि सहयोग पुर्याएको हुन्छ ।
यदी तपाईं कुनै कारण बेड रेस्टमा हुनुहुन्छ भने नियमित माछा खनाले तपाईंलाई छिटै रिकभर हुन्छ ।
यदी तपाईं सधैं निरास देखिनु हुन्छ भने नियमित माछा खाने गर्नाले तपाईंमा त्यतिकै खुशी हुने परिबर्तन आउन थाल्छ ।
नियमित माछा खनाले बच्चामा लाग्ने सामान्य रोगहरुबाट बच्न सकिन्छ ।
नियमित माछा खाने मान्छेलाई छिटो बुढो पनि देखिन्न ।
माछा त्यस्तो मासु हो जुन तपाईंले ७ देखी १० मिनेटमा तयार गएर खाना सक्नु हुन्छ किन कि माछा एकदम छिटो पाक्ने गर्छ । जसबाट तपाईंको समयबचत हुन्छ ।
माछा खादा जिउ भारी नहुने हुँदा दिउसो भर शरीर चङगा हुन्छ र काममा मन धेरै जान्छ ।
माछाको के के बनाउने र कसरी खाने ?
अन्य मासु जस्तै तपाईंले माछाका पनि बिभिन्न परिकारहरु बनाउन सक्नु हुन्छ जस्तै सुप,सलाद,करी,बिर्या
नी,फ्राइ,ग्रिल,बोइल,स्टिम, फिस टिक्का,फिस पास्ता,झिङगे माछा पिज्जा, फिस चिल्ली,फिस या प्राउन चाउनिन,फिस सिजलर, आदी ।माछा एक स्वादिस्ट,छिटो पाक्ने,सजिलो तरिकाबाट पकाउन मिल्ने,छिटो पच्ने र शरीरलाई चाहिने सम्पूर्ण तत्वहरु पाइने खाना मानिन्छ ।
माछा रोज्दा जहिले पनि सके सम्म ताजा खोज्नुस,माछा ताजा छ कि छैन भन्ने कुरा माछाको कान लोटी खोलेर हेर्नुस् रातो कलरको छ भने त्यो ताजामानिन्छ र यदी खैरो हुँदै गाको छ भने त्यो बासी मानिन्छ । त्यस्तै माछा ताजा कि बासी पता लगाउन माछाको आँखा हेरेर पनि छुट्याउन सकिन्छ । माछाको आँखा रातो र झरिलो देखिएको छ भने त्यो ताजा हुन्छ र आँखाको कलर खैरो र चाउरी परेको छ भने त्यो बासी मान्न सकिन्छ